မန်းလေး BarCamp 2012 မှာ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း လှုပ်ရှားမှု့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မန်းလေး BarCamp 2012 မှာ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း လှုပ်ရှားမှု့
မန်းလေး BarCamp 2012 မှာ ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း လှုပ်ရှားမှု့
Posted by kanjosan on Feb 6, 2012 in Business & Economics, Think Tank | 10 comments
ကျင်းပလျှက်ရှိသော Mandalay BarCamp 2012 တွင် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်းရရှိရန် လှုပ်ရှားမှု့တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်… ကြော်ငြာများတွင် ၅၀၀၀ တန်ဆင်းကဒ် စတေကာများ လိုက်ကပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်…
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ပြည်သူပိုင်ထားရချုင်းအဓိက က last mile ပြသနာကြောင့်ပါ… ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေမရတဲ့ last miles တွေမှာရင်းနှီးမှာမဟုတ်လို့ပါ…. အဲဒီအခါမှာနိုင်ငံရေးပြသနာတွေရှိလာနိုင်လို့ပါ..
last miles problem ကို ခဏမေ့ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးနည်းနည်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
မြန်မာနှင့် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများ၏ တယ်လီဖုန်း သုံးဆွဲနိုင်မှု့ကို ယှဉ်ကြည့်လျှင် တော်တော်နိမ့်ကျနေသည်ကို တွေရပါသည်… ဆက်သွယ်ရေးမှ လူကြီးမင်းများ ဒါတွေကို မသိဘူးလား မပြောတတ်ပါ…
ထိုင်း – လူ ၁ဝဝ တွင် ဖုန်း ၁ဝ၁ လုံး
မလေးရှား – လူ ၁ဝဝ တွင် ၁၂၁ လုံး
အင်ဒိုနီးရှား – လူ ၁ဝဝ တွင် ၉၂ လုံး
ကမ္ဘောဒီးယား – လူ ၁ဝဝ တွင် ၅၈ လုံး
လာအို – လူ ၁ဝဝ တွင် ၆၅ လုံး
စင်္ကာပူ – လူ ၁ဝဝ တွင် ၁၄၄ လုံး
မြန်မာ – လူ ၁ဝဝ တွင် ၁ လုံး
ကနဦးချပေးမည့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းလေးသန်းအတွက် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ၂၂ခုမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ငွေကျပ် ၅ ဘီလီယံစီ အချိုးကျ ထည့်ဝင်ထားကြောင်း၊ တန်ဖိုးနည်း ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းဖုန်း သန်း၃၀ချပေးမည့် စီမံကိန်းကို ၂၀၁၅ခုနှစ် အပြီးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ။´ ၄င်းသတင်းအရ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလျှင် ၅ဘီလီယံနှင့် ကုမ္ပဏီ ၂၂ခုအတွက် ၁၁၀ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။
၄င်းတို့က ဖုန်းတစ်လုံးကို ၃၀၀၀၀၀နှင့် ပြန်ရောင်းစားသော် ဖုန်း ၄သန်းအတွက် 300000 x 4000000 = 1200,000,000,000 ( ကျပ်- ဘီလီယံ တစ်ထောင့်နှစ်ရာ တိတိ ) ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းပမာဏကို ကုမ္ပတစ်ခုချင်းအချိုးကျပြန်ခွဲဝေလျှင် (ကျပ်- ငါးဆယ့်လေးဘီလီယံ) ကျော် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်းကိုသာခွင့်ပြုလိုက်ပါက ၄င်း ကုမ္ပဏီ ၂၂ ခု၏ အကျိုးအမြတ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးတို့၏ အကျိုးအမြတ်များ ထိခိုက်နစ်နာမည် ဖြစ်သဖြင့် အိုဟောင်းနေသော ဆက်သွယ်ရေး နည်းဥပဒေများကိုခုတုံးလုပ်ကာ ပြုလုပ်၍မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွင်တွင် ငြင်းဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ခေါ်ဆိုခတွေ မပါသေးဘူးနော် ….
အမှန်မှာဆို Sim Card ဆိုတာကတော့ သဘောအရ အလကားပေးတယ်တောင်ပြောလို့ရပါတယ်
လိုက်စောက်အော်နေဒါဘာဗျာ ( အမယ်လေးစက်စရာဂျီး )
ကျုပ်သိသလောက်က Sim Card တစ်ခုဝယ် ရရာ ဘာလို့ခေါ်သဒုံး
မိုဘိုင်ဆိုလား အဲ့သည်ထဲကိုထည့်လိုက်ရင် ဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘူးလား
တစ်ခါတစ်လေ ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ ဟန်းဆက်ဆိုတာဘာလဲ
ကျုပ်တော့မသိဘူး ကျုပ်သိသလောက်က Sim Card ရရင် ရရာဖုန်းတစ်လုံးထဲထည့်
ငါ့မှာ ဖုတ်ရှိဒယ် ဒါလေးဘဲသိတာ
နားလည်တဲ့ ဆြာကြီးတွေလည်း ကျုပ်တို့ကို မသိနားမလည်ရန်ဂေါဆိုပြီး
စောက်သုံးမကျတဲ့ အစိုးမြင်ဝါဒတွေနဲ့ လာမလှောင်နေဂျဘာနဲ့
တစ်ယောက် Sim Card တစ်ခုမဖြစ်နိုင်သေးသည့်တိုင်အောင်တောင်
တစ်အိမ်ထောင် Sim Card တစ်ခုတော့ပစ်စလတ်ခတ် ရတန်ကောင်းပါရဲ့
မရတော့လည်း တစ်ချိန်လုံး လက်ဝါးကြီးအုပ်လာတဲ့ လူမသားတွေကို ယှဉ်ပြိုင်လာတဲ့
ပြိုင်ဖက်ဆိုတာကို ကျုပ်ကတော့ အားပေးတယ်
ပြည်သူတွေဆီကငွေတွေကို ဒီလိုနည်းတွေအသုံးချပြီး ပြည်ပအကြွေးတွေဆပ်ပေးမလို့လား။ သမ္မတကြီးကို ဘယ်လိုများ ၀ိုင်းနားချထားကြလဲ။ ဒီငွေတွေကို ဒီနည်းနဲ့ရှာပြီး ကျွန်တော်တို့ကုမ္မဏီတွေက ထိုးဆပ်ပေးမယ် များပြောကြလားဗျာ… သူတို့နံမည်မခံပဲ တိုင်းပြည်နံမည်ခံပြီး ပြင်ပကငွေတွေချေး၊ ပြီးတော့ခွဲသုံး၊ (ဂုတ်သွေးစုတ်လို့) ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကြပြန်မထည့်။ ဒီလိုသာဆက်သွားရင်တော့… ဒီနည်းတွေသာ ဆက်သုံးနေရင်တော့…….
မြန်မာ – လူ ၁ဝဝ တွင် ၁ လုံး တဲ့
ကြားလို့ မှ ကောင်းကြသေးရဲ့လား အရပ်ဂဒို့ ရဲ့
ခုလဲ ရိတ်လို့ မ၀သေးဘူး..
သူရို့ ရင်းထားတဲ့ သုံးသိန်းတန်အတွက်ကုန်အောင်ရောင်းကြဦးမယ်
ဘယ်လောက်တောင် ထပ်ရိတ်ချင်နေကြလဲ မသိဘူး…
နင်တို့ ရိပ်လွန်းလို့ငါလဲစပင်တေင် ညှပ်စရာမလိုတော့ဘူး တောင်ဂတုံးဖြစ်နေဘီ
ဖုန်းတစ်လုံးကို ၃၀၀၀၀၀နှင့် ပြန်ရောင်းစားသော် ဖုန်း ၄သန်းအတွက် 300000 x 4000000 = 1200,000,000,000 ( ကျပ်- ဘီလီယံ တစ်ထောင့်နှစ်ရာ တိတိ ) ရောင်းလို့ရရင် ဒီပိုက်ဆံတွေ ဘယ်သူတွေလက်ထဲ ရောက်မလဲဆိုတော့… ခရိုနီတွေလက်ထဲရောက်ပါမယ်… ဒီငွေတွေကို တကယ့်လိုတဲ့နေရာ ဆင်းရဲမှု့ပပျောက်ရေး နိုင်ငံတိုးတတ်ရေး.. ကျန်းမာရေး.. ပညာရေးတွေအတွက် သုံးမယ်ဆိုရင်… ဖုန်းကို ၃ သိန်းနဲ့ဝယ်ရလဲ တကယ်အကျိုးများပြီး ကုသိုလ်ရလို့ ၀ယ်လိုက်ပါမယ်…
ဒီဖုန်း ၃၀၀၀၀၀ တန် ၄ သန်းစီမံချက်က ချမ်းသားပြီးသား ရှိပြီးသား နိုင်ငံကို ဂုတ်သွေးစုပ်အမြတ်ထုပ်တဲ့ ခရိုနီတွေလက်ထဲ.. အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးက လူကြီးတွေလက်ထဲ ရောက်သွားရင် လုံးဝမ၀ယ်သင့်ဘဲ ဆန်ကျင်သနဒီဖုန်း ၃၀၀၀၀၀ တန် ၄ သန်းစီမံချက်က ချမ်းသားပြီးသား ရှိပြီးသား နိုင်ငံကို ဂုတ်သွေးစုပ်အမြတ်ထုပ်တဲ့ ခရိုနီတွေလက်ထဲ.. အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးက လူကြီးတွေလက်ထဲ ရောက်သွားရင် လုံးဝမ၀ယ်သင့်ဘဲ ဆန်ကျင်သင့်ပါတယ်…..
MPT= ဆက် တွယ် ရေး (ပြည်သူဆီမှ ဖြစ်ပါသည်။)
Actually, don’t buy with 300000 kyats . All are one side to stop buying , they must sell with zero kyat and call charges must reduce about 15 kyats compare to Lao, Cambodia.